.အရေပြားအနာ၊ နှင်းခူ၊ ဝက်ခြံ၊ သန်ကောင်၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာ တို့အတွက် တမာရွက် ရဲ့ ထူးခြားအာနိသင်. – Thukhuma
.မျက်ခုံးမွှေး ထူထူလေးဖြစ်ဖို့ (၁၀) ရက်အတွင်း သိသာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း.
.သင့်အသားအရေကို ကြည်လင်ဖြူဝင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၂) သွယ်.
.လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူး သူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွား ပါနဲ့.. အရေးကြီး လို့ပါ.
.ညည အိပ်လို့ မရအောင် ချောင်းဆိုးနေရင် ဒီနည်းလေးတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ.
.တစ်ပတ်နစ်ကြိမ်သောက်နေရုံဖြင့် ဆီးချိုသွေးချို့ သက်သာနိုင်သောဆေးနည်း.
.နှာရည်ယို နှာစေးနှာခေါင်းပိတ် ပျောက်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်း.